फेसबुकको फन्दा - अपराध - साप्ताहिक
पैसासँगै जोवन पनि लुटियो
रेस्टुराँको काम सकेर कोठामा फर्किएर फेसबुक हेर्दा जेभी नामको युवाको फ्रेन्ड रिक्वेस्ट देखिन् जेस्मिनले । प्रोफाइल तस्बिर हेरिन्, डा। जेभी लेखिएको थियो । थाइल्यान्ड तथा दुबईतिर घुमघाम गरिएका तस्बिर थिए त्यहाँ । ठीकै लाग्यो, उनले साथी बन्ने प्रस्ताव स्वीकार गरिन् । कामको खोजीमा साइप्रस पुगेकी जेस्मिन स्थानीय एक रेस्टुराँमा काम गर्थिन् । मासिक ६० हजारको कमाइले नेपालमा भएको परिवारको भरथेग गरेकी थिइन् । साइप्रसको काम उनलाई चित्त बुझेकै थियो ।
जेस्मिन र जेभीबीचको कुराकानी बाक्लिँदै गयो । भर्चुअल दुनियाँबाट साथी भए पनि एक वर्षको बीचमा सुख–दुस्खका कुराकानीसँगै मन पनि साटिइसकेको थियो । कुराकानीका क्रममा जेभीले आफूसँगै आफ्नी आमासमेत डाक्टर छिन् भनेका थिए । आमा क्यानाडाकी पीआर होल्डर । उनी नेपालमा थिए । जेभी अविवाहित थिए, कुसुम पनि जीवनसाथीको पर्खाइमा थिइन् । करिब एक वर्षको फेसबुक यात्रामा साथीको सम्बन्धमा प्रेमको टुसा उम्रिइसकेको थियो । ‘भो अब साइप्रस नबस, नेपाल आऊ, अनि दुवै क्यानाडा जाउँला,’ फेसबुकको च्याट बक्समा आएको जेभीको प्रस्तावले कुसुम फुरुंग भइन् ।
फुरुंग नहुनु पनि किन ?
साइप्रसको साटो क्यानाडा, त्यो पनि रेजिडेन्स भिसामा । बोनस डाक्टर जीवनसाथी ।
जिस्किएको पो हो कि भन्दै उनी केही समय मौन बसिन् । जेभीले कर गरेको गर्‍यै गरेकाले जेस्मिन जेभीसँग जीवन साट्न पुस १५ मा साइप्रसलाई बाइबाई गर्दै नेपाल झरिन् । जेस्मिन नेपाल फर्कंदा जेभी विमानस्थल नपुग्ने कुरै थिएन । काठमाडौं आएर परिवारसँगको भेटघाट सकी जेस्मिन जेभीसँगै बस्न थालिन् । काठमाडौं बसाइ रमाइलो हुँदै थियो ।
‘अब क्यानाडा जाऊँ,’ जेभीले प्रस्ताव ल्याए । १८ लाखजति लाग्ने रहेछ, मसँग नौ लाख मात्र भयो भन्दै उनले जेस्मिनसँग नौ लाख रुपैयाँ मागे । जीवन साट्न तयार भएकी जेस्मिन नौ लाख दिन किन हिचकिचाउँथिन् र ? सहजै दिइन् ।
अमेरिका जाने प्रस्ताव आएको आयै गरेपछि वैदेशिक रोजगारीका लागि लेबनान पुगेकी सिर्जना दोंग त्यहीं अडिरहन सकिनन् र नेपाल फर्किइन् । फेसबुकमा चिनजान हुँदै निकट भएका एक युवाले उनलाई अमेरिका लाने प्रस्ताव गरेका थिए जो आफैं अमेरिकी पिआर होल्डर थिए । ‘मेरो अमेरिकाको पिआर छ, नेपाल फर्किए हुन्छ, म अमेरिका पठाइदिन्छु’ भनेपछि उनी नेपाल फर्किइन् । भेटघाटमा केटा ठीकै लाग्यो उनलाई । उनको कुरा पत्यारिलो लागेपछि उनले अमेरिका जान ९ लाख रुपैयाँ दिइनन् मात्र, उही फेसबुके फ्रेन्डको प्रस्तावअनुसार क्यानाडा जान आफ्ना भाइ सञ्जय दोंग र मिम लामालाई समेत राजी गराइन् । दिदीको प्रस्ताव मानेर यी दुवैले ती युवालाई १३ लाख बुझाए ।
क्यानाडा जान पैसा बुझाएपछि बिस्तारै जेभीको व्यवहार फेरिँदै गयो । भिसा लागिसकेको भने पनि उनी क्यानाडाको कुरा निकाल्यो कि पन्छिन थालेपछि जेस्मिनको मनमा चिसो पस्दै गयो । आज–भोलि भन्दै पन्छिइरहेपछि मनमा उम्रिएको माया मार्दै उनी प्रहरीको शरणमा पुगिन् । त्यसपछि डा. जेभी एकाएक गायब भए ।
उजुरीको प्रकृति साइबर क्राइम भए पनि विषय ठगीको थियो । ठगी हेर्ने प्रहरी अधिकारी जेभीको खोजीमा खटिए तर उनी सबै सम्पर्क टुटाएर लापत्ता भैसकेका थिए । साउन ४ गते जेस्मिनलाई प्रहरीको फोन आयो । उनी हतारिँदै टेकुस्थित महाशाखाको कार्यालयमा पुगिन् । हातमा हत्कडी लगाएको अवस्थामा उनै जेभी थिए । प्रहरीले उनलाई जेभीसँग परिचय गरायो, ‘ल भेट्नुस् एसएलसी मात्र पास भएका डाक्टर जेभी उर्फ तुलबहादुर तामाङ,’ जेस्मिन छ्याङ्ग भइन् ।
सिन्धुपाल्चोकका तामाङ न आफू अमेरिकाको पिआर होल्डर थिए, न उनकी आमा क्यानाडाकी डाक्टर । डाक्टर भनेर साइप्रसमा कमाएको पैसासँगै जसलाई उनले सुम्पिएकी थिइन् उनी सामाजिक सञ्जाललाई हतियार बनाएर युवतीलाई प्रलोभनमा पारेर ठगी गर्ने धन्दावाल रहेछन् । अमेरिका जाने सपनामा मग्न हुँदै लेबनानबाट काठमाडौं फर्किएकी दोंग पनि प्रहरीको शरणमा पुगिन् । दोंगलाई अमेरिकाको सपना बाँडेर उनीसँगै उनका भाइहरूलाई समेत चुना लगाउने व्यक्ति पनि उनै थिए— तुलबहादुर ।
महाशाखाका प्रहरी निरीक्षक गोविन्द पन्थीका अनुसार ‘तुलबहादुर फेसबुकमा नाम परिवर्तन गरी युवतीहरूलाई साथी बनाएर ठग्ने धन्दामा सक्रिय देखिएका छन् । उनले जेस्मिन र दोंगलाई एउटै अपराध प्रवृत्ति अपनाएर ३१ लाख रुपैयाँ ठगेको खुलेको छ । अपराध प्रवृत्तिका आधारमा उसबाट ठगिएका युवतीहरूको संख्या अझ बढ्न सक्ने भन्दै प्रहरी उजुरीको पर्खाइमा रहे पनि थप उजुरी भने आएको छैन ।
प्रहरी निरीक्षक गोविन्द पन्थी तुलबहादुर सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी युवतीलाई प्रलोभनमा पारेर ठगीमा सक्रिय देखिएको बताउँछन् । सुरुमा साथी बनेर निकट हुने अनि कुराकानीमा ती युवतीको कमजोरी फेला पारेर प्रलोभन दिई ठगी गर्ने अपराध प्रवृत्ति उसमा देखिएको पन्थीले बताए ।
‘फेसबुकमा चिनजान भएकालाई पनि सहजै विश्वास गरिहाल्नेलाई यस्ताले सहजै फन्दामा पार्ने गरेका छन्,’ पन्थीले भने, ‘ठगको प्रलोभनमा पर्दा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका २ युवती नेपाल फर्किए अनि नराम्रोसँग ठगिए, एउटीको त जीवनसँगै खेलवाड गरेको देखियो ।’
युरोपको सपनाले फन्दामा
महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष ठगीसम्बन्धी ४ सय उजुरी आएका थिए । यो वर्ष उक्त संख्या बढेर ८ सयको हाराहारीमा पुगेको छ । महाशाखामा आएका उजुरीको प्रकृतिमा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ठगीका उजुरीको संख्या बढी छ । महाशाखाका प्रवक्ता सहकुल थापा वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगीलाई मानव ओसारपसारसँग जोडेर अनुसन्धान अघि बढाएपछि पीडितहरू प्रहरीमा आउने क्रम बढेको निष्कर्ष सुनाउँछन् ।
महाशाखाका प्रवक्ता सहकुल थापाका अनुसार इराक, दक्षिण आफ्रिका, दुबई पठाउने भन्दै ठगी भएको उजुरी पनि आउँछन् । अमेरिका, क्यानाडा, जापान, बेलायत, कोरिया, हङकङ र रूस लाने प्रलोभनमा पारी ठगी भएको बढी देखिन्छ । ‘युरोप–अमेरिका, क्यानाडा जाने भनेपछि लैजान्छु भन्ने व्यक्ति को हो, उसले कसरी लान सक्छ, केही नहेरी पैसा दिने प्रवृत्तिले ठगीमा संलग्नलाई सहज बनाएको देखिन्छ,’ थापाले भने, ‘जसरी पनि रोजगारीका लागि राम्रो देश जाने सोच नबदलिएसम्म यस्ता ठगीका घटना बढिरहनेछन् ।’
प्रकाशित :श्रावण २०, २०७३
फेसबुकको भिडियो डाउनलोड गर्न
फेसबुकको दस वर्ष